April 2010 | Bur-Imna
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့ပေါ် ကလိုင်ကနိုင်ရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးမှာ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီအချိန်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပွားပြီး ရုံးမှ ဝန်ထမ်း ၃ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည်။
“ဗုံးဖေါက်တဲ့လူက ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်လို့ပြောတာပဲ၊ ဖြစ်တာက မြို့ပေါ်မှာပါ ည ၁၁ နာရီလောက် ပေါက်ကွဲမှုက ဖြစ်တယ်” ဟု ကျိုက်မရောမြို့နယ်မှ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုပေါက်ကွဲမှုသည် မြို့ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ ထိန့်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြကြောင်းကိုလည်း ၄င်းက ပြောသည်။
ယခုလပိုင်းအတွင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတိုင်း အတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတို့၏ လက်ချက်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုတက်သော်လည်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတိုင်း တရာခံကိုဖမ်းဆီးရရှိခြင်းမရှိသေးပါ။
“ကျနော်တို့ မကြားသေးပါဘူး၊ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ အဲဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုး လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ဟာ ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းချင်တယ်” ဟု ဒုတိယဥက္ကဌ နိုင်ရဿက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:31 AM0comments
ဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲကြုံတွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိ
စစ်ရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်သတင်းကြောင့် နေအိမ်စွန့်ခွာပြီး ခလောက်ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ရောက်ရှိလာကြသည့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများအတွက် နေထိုင်ရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာများ အခက်အခဲကြုံတွေ့ဖွယ်ရှိသည်။
“ဒီ ၂/၃ ရက်အတွင်းမှာဆိုရင် စားသောက်ဖို့က အဆင်ပြေပါတယ်၊ နောက်ရက်တွေအတွက်က မသေခြာသေးဘူး၊ TBBC အဖွဲ့တွေ မနေ့က လာကြည့်သွားတယ်၊ သူတို့နေရာပြန်ရောက်ရင် စားနပ်ရိက္ခာတွေ ပို့ပေးဖို့ စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုထိတော့ သတင်းမကြားသေးဘူး” ဟု ခလောက်ခနီ မွန်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂၅၀ ဦးရောက်ရှိနေပြီး၊ ၄င်းအနီးရှိ ဖလဲ့ဒွန်းဖိုက်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလည်း ဒုက္ခသည် ၂၇၉ ဦးရောက်ရှိနေသည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၏ စာရင်းကောက်နှုတ်ချက်အရ သိရသည်။
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများသည် အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ခလေးများ အဓိကပါဝင်ပြီး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေမှ သပြုချောင်းရွာ၊ ဖလန်ရွာ၊ ဟနီရွာ၊ ချဲတိုက်ရွာနှင့် အနင်းရွာမှ ရွာသားများဒဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိအခြေအနမှာ ခလောက်ခနီနှင့် ဖလဲ့ဒွန်းဖိုက်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းမှာ ခေတ္တနေရာချထားပေးသည်။
၄င်းဒုက္ခတို့သည် စစ်ရေးအခြေအနေ ငြိမ်းအေးလာပါက နေရပ်သို့ပြန်ရန် အစီစဉ်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာ စားဝတ်နေရေး အစဉ်ပြေနေကြသော်လည်း သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်ကြောင့် အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနေသည်။
“ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို တက်ဖို့တော့ အစီစဉ်မရှိဘူး၊ ရွာမှာ ခြံတွေလည်းရှိသေးတော့ အခြေအနေကောင်းရင် ရွာကိုပဲ ပြန်မှာပါ၊ အခု အမျိုးသားက ရွာမှာရှိနေတယ်၊ ကျမနဲ့ ခလေးတွေကျတော့ အရင်ထွက်လာထားတာပါ၊ ယောကျာ်းတွေကျတော့ ပြေးလို့လွယ်တယ်လေ၊ သူတို့တွေက အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှ တက်လာမယ်” ဟု ခလောက်ခနီသို့ရောက်ရှိနေသည့် သပြုချောင်းရွာမှ အမျိုးသမီးကတစ်ဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသည့် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ငြင်းပယ်ပြီးနောက် လာမည့် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား ထိုးစစ်ဆင်မည်ဟူသော သတင်းများနှင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို မြင်တွေ့နေရခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ရွာသားများ အိုးအိမ်စွန့်ကာ တိမ်းရှောင်လာကြသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:26 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:25 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 2:12 AM0comments
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနယ်မြေအတွင်းရှိ ရွာသားများ အိုးအိမ်စွန့်ကြပြီ
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရတို့၏ စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အရိပ်အယောင်များ မြင်တွေ့နေရသည့်အတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှ ရွာသားများ အိုးအိမ်စွန့်ကာ စစ်ဘေးမှ လွတ်ကင်းနိုင်မည့် အရပ်သို့ ရှောင်တိမ်းနေကြသည်။
ရာချီရှိသော ရွာသားများ ရေးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းသို့လည်း ရာချီရောက်ရှိလာကြကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
“ရေးမြို့ကို ပြောင်းလာတဲ့ လူတွေကတော့ ရေးမြို့မှာ သူတို့ဆွေမျိုးတွေ ရှိကြတယ်၊ အများအားဖြင့် ကျုံလောင်း၊ ဝယ်ဇင်၊ ဖလန် စတဲ့ရွာတွေက များတယ်၊ အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းဖို့ ခက်တယ်၊ ရာချီရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်” ဟု ရေးမြို့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသည့် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ငြင်းပယ်ပြီးနောက် လာမည့် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာပြီး၊ ထိုးစစ်ဆင်မည်ဟူသော သတင်းများနှင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို မြင်တွေ့နေရခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ရွာသားများ အိုးအိမ်စွန့်ကာ တိမ်းရှောင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တိမ်းရှောင်နေသူတို့က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ရွာမှာဆို လူတောင်မရှိတော့ဘူး၊ ဈေးဆိုင်တွေဆို အားလုံးမသယ်နိုင်လို့ လျှော့ဈေးနဲ့ အကုန်ရောင်းတယ်၊ ဘီယာတစ်ဗူးကို ၅၀၀ ကျပ်နဲ့ရောင်းတယ်၊ ကြက်သားဆို တစ်ပိဿာ ၁၈၀၀၊ ဆန်တစ်တင်းကို ၈၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဝယ်တဲ့သူ မရှိဘူး” ဟု ဖလန်ရွာမှ ရေးမြို့သို့ တိမ်းရှောင်လာသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“စစ်သားတွေ ထော်လာဂျီကားနဲ့ သွားနေတာ တွေ့နေရတယ်၊ တစ်ကားဆို စစ်သားအယောက် ၂၀ လောက်ပါမယ်၊ လက်နက်အပြည့်အစုံပဲ၊ ထော်လာဂျီကားနဲ့ဆို အဝေးက လာတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒီရေးမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ စစ်တပ်ကပဲ ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဝယ်ဇင် (မွန်ပြည်သစ် ထိန်းချုပ်နယ်မြေ) ဘက်ကို တက်မယ်လို့ ကြားတာပဲ” ဟု ရေးမြို့အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့် ပြေးဝင်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် ခလောက်ခနီမွန်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည် ၄၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း မွန်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက ပြောသည်။
လတ်တလောတွင် ဒုက္ခသည်များကို စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် အသိမိတ်ဆွေအိမ်များတွင် နေရာချထားပေးပြီး၊ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (TBBC) မှတဆင့် မွန်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:29 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 4:12 AM0comments
မြန်မာစစ်အစိုးမှ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ပြည်သူ့စစ်အသွင်းပြောင်းရန် ကမ်းလှမ်းထားချက်ကို ပါတီမှ လက်မခံကြောင်း အကြောင်းပြန်ထားပြီးနောက် လက်ရှိတင်းမာနေသည့်အနေအထားမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီလက်အောက်ရှိ တပ်ရင်းများ စစ်ရေးအသင့်ပြင်ထားသည့်အနေအထားမှာရှိနေသည်။
“ပါတီအနေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပါတီဝင်တွေကို ခေါ်ယူစုဆောင်းနေပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်နေတယ်” ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုလို ပါတီဝင်များကို ဌာနေသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေသည်ကို ယခင်က ကြားထားသော်လည်း ယခုလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ထားကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ ပါတီဝင်များက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်းရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီရုံးများ၊ ပါတီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရုံးများကို နီးစပ်ရာမွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်ရာနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့ထားခိုင်းသည်ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ချေးမွန်က ပြောသည်။
ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကလည်း “ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကအစ သူ့ဌာနနဲ့သူ ပါတီဝင်တွေရော သူတို့ဌာနကို ၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး အမြန်ပြန်ကြဖို့ အထက်ကတာဝန်ရှိသူတွေ ညွှန်ကြားထားတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်ဟောင်းများ၊ ပါတီအကျိုးဆောင်များ ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာတပ်ရင်းများမှာ အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်ထားရန် တာဝန်ရှိသူများက အမိန့်ပေးထားသည်ဟု အဆိုပါခေါင်းဆောင်နှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရကြား အခြေအနေတင်းမာနေသော်လည်း တစုံတရာဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ထိုသတင်းကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း နေထိုင်နေကြသည့် ဒေသခံများ စစ်ထပ်မံဖြစ်ပွားမည်ကို ထိန့်လန့်ကြောက်ရွံ့ကာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ရာနှင့်ချီ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြသည်။
၂၀၁၀ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင်များတို့သည် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ၄င်းတို့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံပါက ၁၉၉၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အခြေအနေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားမည်ဟု ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား ပြောဆိုထားသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 4:11 AM0comments
ပြည်သူ့စစ်ပုံစံ လက်မခံဟု မွန်ပြည်သစ် တရားဝင်ပြော
လက်ရှိမြန်မာအစိုးရမှ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ပြည်သူ့စစ်ပုံစံ အသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်းခိုင်းသည့်အပေါ် ပါတီမှ လုံးဝလက်မခံကြောင်း ယနေ့ပါတီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တရားဝင်ပြောကြားသည်။
ပြည်သူ့စစ်ပုံစံအဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြောင်းကို အမျိုးသားညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သူ ပါတီမှ ဗဟိုကော်မတီဝင် နိုင်တင်လှမှ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံသို့ သွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
“အရှေ့တောင်တိုင်းက လက်ခံရရှိထားတာကတော့ သေချာပါတယ်” ဟု ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ချေမွန်က ပြောသည်။ “လောလောဆယ်မှာတော့ ဟိုကနေ ပြန်ပေးတဲ့သဘောထားကတော့ မရရှိသေးပါဘူး”။
မြန်မာစစ်အစိုးရမှ ပြည်သူ့စစ်ပုံစံအဖြစ် အတင်းအကြပ် ဖွဲ့စည်းခိုင်းပါက ပြန်လည်ကာကွယ်သွားမည့်အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ၄င်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
“ယခုလောလောဆယ်မှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီရုံးတွေ ကျနော်တို့နဲ့ နီးစပ်ရာ ကျနော်တို့နဲ့ ထိစပ်တဲ့နယ်မြေတွေဘက်မှာ ပြောင်းရွေ့ထားပါတယ်” ဟု နိုင်ချေးမွန်က ပြောသည်။
၂၀၁၀ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင်များတို့သည် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ၄င်းတို့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံပါက ၁၉၉၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အခြေအနေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားမည်ဟု ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား ပြောဆိုထားသည်။
အမျိုးသားအခွင့်အရေးပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်ခင်စပ်ကြား တပ်ဖွဲ့များအသွင်ပြောင်းလက်ခံရန် များစွာအခက်အခဲရှိသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မွန်မျိုးချစ်များအနေဖြင့် လက်ခံလိုသောဆန္ဒမရှိပါ။
လောလောဆယ်အခြေအနေ၌ ယခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအထားအတိုင်း လက်ရှိရရှိထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို အတက်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းလိုသည်။ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အရေးပေါ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပပြီး အလေးအနက်ထပ်မံဆွေးနွေးထားကြသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အဓွန့်တည်တံ့ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရန် အလေးအနက် လိုလားဆန္ဒရှိကြသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရယူစဉ်က သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲမှ သဘောထားပေးထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံရေးကိစ္စများကို နောင်တက်လာမည့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလိုသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 1:30 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 2:43 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 2:42 AM0comments
ထားဝယ်ခရိုင်ရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း စစ်အစိုးရတပ်များ ဝင်ရောက်လာ
မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်ရင်း နှစ်ရင်းက တနသာင်္ရီတိုင်းရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေအနီး ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်း ဝင်ရောက်တပ်ရင်းဆွဲထားသည်။
ထိုဒေသအတွင်း ဝင်ရောက်တပ်စွဲထားသည့် စစ်အစိုးရတပ်တို့မှာ ခလရ ၂၈၂ နှင့် တခြားတပ်ရင်းတစ်ရင်းဖြစ်သည်။ ထိုတပ်ရင်းသည် ယခုအပတ်အတွင်း ဝင်ရောက်နေပြီး ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ စနီးဒိင်မွန်ရွာအနီးတွင် တပ်ချထားသည်ဟု ဒေသခတို့၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ တနလာင်္လာနေ့မှာ စစ်သား အယောက် ၂၅ လောက် အဲဒီစနီးဒိင်ရွာမှာ ရောက်နေတယ်” ဟု မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
စနီးဒိင်ကျေးရွာနှင့် ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသခံတို့က လက်ရှိအခြေအနေမှာ လိုအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အခြေအနေတွေကလည်း အပစ်ခတ်မရပ်ခင်ကလိုဖြစ်နေပြီး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရတို့လိုလားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် (သို့မဟုတ်) ပြည်သူ့စစ်ကို ပြတ်သားစွာငြင်းပယ်နေခြင်းကြောင့် ဒေသခံတို့က ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၇ ရက်နေ့မှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်တို့ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး အကြောင်းပြန်ရန် ပြောထားခဲ့ပြီး၊ အကယ်၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နယ်ခြားစောင့်တပ် (သို့မဟုတ်) ပြည်သူ့စစ်ကို လက်မခံလျှင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ယခင် အပစ်ခတ်မရပ်စဲခင်ကာလကဲ့သို့ ရောက်သွားမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်မှ ပြောထားခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီခဲ့သည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပါတီခေါင်းဆောင်များ စစ်အစိုးရတို့ကို အကြောင်းပြန်ပေးနိုင်ရန် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်နေကြသည်။ ပါတီဝင်များလည်း အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်မျှော်နေကြဆဲဖြစ်သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ချေးမွန်က ပြောသည်။
ခလရ ၂၈၂ တပ်ရင်းသည် ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူမြို့နယ်တွင် အခြေချထားပြီး၊ ခလရ ၆၇၅ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် တည်ရှိနေသည်ဟု မွန်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:35 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:34 AM0comments
ဂိတ်ကြေးများလာခြင်းကြောင့် ကားသမားများ အခက်ကြုံနေကြရ
သံဖြူဇရပ်-ဘုရားသုံးဆူကားလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပြေးဆွဲနေသည့်လိုင်ကားများ လမ်းတွင် ဂိတ်ကြေးအဆမတန်ပေးဆောင်နေရခြင်းကြောင့် ကားသမားများ အခတ်ကြုံနေကြသည်။
“တခေါက်ဆွဲရင် တစ်သိန်းခွဲလောက်ကတော့ ကုန်နေမြဲပဲ အခမသင့်ရင်လည်း အဲဒီထက်ပိုများတယ်၊ ဂိတ်တွေကလည်း သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းမကောက်ဘူး ရရင်ရသလို တောင်းတယ်၊ မပေးပြန်တော့လည်း အမျိုးမျိုး ရစ်တယ်၊ ကျနော်ဆို စကားများများမပြောချင်ဘူး တောင်းရင်ပေးလိုက်တာပဲ၊ ခရီးသည်တွေကိုလည်း အားနာတယ်လေ” ဟု သံဖြူဇရပ်-ဘုရားသုံးဆူတွင်ပြေးဆွဲနေသည့် ကားသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ခရီးသည်တစ်ဦးကို အများဆုံး ဗမာငွေသုံးသောင်း နှစ်သောင်းခွဲလောက်ပဲတောင်းတာ အဲဒါကို ဂိတ်တွေအများအပြားပေးနေရတယ်၊ ဆီဖိုး၊ ဂိတ်ဖိုး အားလုံးနှုတ်လိုက်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်မှ ကိုယ့်အတွက်မကျန်တော့ဘူး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကလည်း ဂိတ်တွေများလာတော့ ကျနော်တို့ ကားသမားတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူးဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
သံဖြူဇရပ်-ဘုရားသုံးဆူလမ်းတစ်လျှောက်တွင် အခွန်ကောက်ခံနေသည့် ဂိတ်စုစုပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ထိုဂိတ်များသည် မြန်မာစစ်အစိုးရမှ ဖွင့်ထားသည့်ဂိတ်၊ အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့များဖြစ်သည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီဂိတ်၊ ကရင်ဒီကေဘီအေ၊ ကေဘီအဖ်က်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ စရဖ၊ ပြီးတော့ ကေအေန်ယူဂိတ်အစရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ဂိတ်ဖွင့်ထားပြီး အကောက်ခွန်များ ကောက်ခံနေသည်။
“လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ဂိတ်တွေကြီးပဲ ကြည့်ရတာ ကားသမားတွေကလည်း ဂိတ်ကြေးပေးရသက်သက်နဲ့ သူတို့အတွက် အနည်းငယ်ပဲကျန်မှာ တဂိတ်ဖြုတ်ပြီးသွားလို့ ဘယ်လောက်မှမဝေးဘူး နောက်တဂိတ်ရောက်ပြန်တယ်၊ တချို့ဂိတ်တွေက တင်ထားတဲ့လူအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ယူတယ်၊ တချို့ဆို တဂိတ်ဘယ်လောက်ဆိုပြီး တောင်းတယ်” ဟု ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူ ခရီးသွားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဂိတ်တစ်ဂိတ်မှာ အများဆုံးတစ်သောင်းကျပ်ပေးဆောင်နေရပြီး၊ တချို့ဂိတ်မှာ ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် တစ်ထောင်ကျပ်ကောက်ခံကာ တင်ဆောင်လာသည့်ခရီးသည်အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အခွန်ဆောင်ရသည်။ ပြည်သူ့စစ်ဂိတ်ကဲ့သို့သော ဂိတ်အသေးတွေကို နှစ်ထောင်ကျပ်ပေးဆောင်နေရသည်။
“ဂိတ်တွေများလွန်းလို့ တစ်လမ်းလုံးရပ်သွားနေရတယ်၊ လိုရာခရီးကို မရောက်နိုင်ဘူး၊ နေ့တဝက်လောက် သွားရတဲ့ခရီးကို တနေကုန်သွားနေရတယ်၊ ခရီးကြန့်ကြာတာပေါ့” ဟု အထက်ပါ ခရီးသည် မိန်းကလေးက ပြောသည်။
ကားပိုင်ရှင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သံဖြူဇရပ်-ဘုရားသုံးဆူလမ်းသွားလာနိုင်ရန်အတွက် ကားတစ်စီးလျင် တစ်နှစ်မှာ ကေအန်ယူကို ဘတ်ငွေ ၁၀၃၀၀ ပေးနေရသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေအရ ခရီးသည်တင်ကားများသည် ယာဉ်အသင်းများတွင် အသင်းဝင်လုပ်ရပြီး အသင်းဝင်လုပ်ရန်အတွက် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ ဘတ်လေးထောင်ပေးဆောင်ရသည်။ သုံးဆူမြို့တွင် ရာမည၊ ပန်းရဂုံ၊ ဖောမဲ့သာ၊ မြို့မ၊ သုံးဆူနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးယာဉ်အသင်းဟူ၍ အသင်းငါးသင်းရှိသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 9:24 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 9:23 AM0comments
မော်လမြိုင်-ရေး ကားလမ်းတစ်လျှောက် အကောက်ခွန်ပိုများလာ
မော်လမြိုင်-ရေး ကားလမ်းတစ်လျှောက် ပြေးဆွဲနေသော မော်တော်ကားများ လမ်းအကောက်ခွန် ပိုများလာခြင်းကြောင့် ကားသမားများ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရကြောင်း မော်လမြိုင်-ရေးသို့ ပြေးဆွဲနေသော ကားသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
လမ်းအကောက်အခွန်များကို ဧပြီလ ပထမအပတ်မှစပြီး ကောက်ခံနေကြောင်း ကားသမားတို့ကပြောသည်။
“မော်လမြိုင်နဲ့ ရေးကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ဂိတ်တွေအများကြီးပဲ၊ တစ်ဂိတ်ကို နှစ်ထောင်ပေးရတယ်၊ တချို့ဂိတ်ဆို တစ်ထောင်၊ အခုဆိုရင် ဂိတ်တွေလည်းများလာတယ်၊ တနေ့ဆွဲတာ ထမင်းဖိုးတောင်မကျန်တော့ဘူး၊ ကြားထဲမှာ ခရီးသည်တွေကလည်း ခရီးစရိတ်လျှော့ခိုင်းသေးတယ်” ဟု စပယ်ယာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခင်က မော်လမြိုင်-ရေး ကားလမ်းတလျှောက်မှာ ရဲမှ ၁ ဂိတ်၊ မော်တော်ပီကယ် ၁ ဂိတ်၊ စစ်တပ် ၁ ဂိတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှ ၁ ဂိတ်နှင့် ကရင်ဒီကေဘီအေ ၂ ဂိတ်ရှိပြီး၊ ဒီကေဘီအေ ၁ ဂိတ်လျှင် (၁၀၀၀) ကျပ်ပေးနေရကာ ကျန်သည့်တခြားဂိတ်များအားလုံးကို (၂၀၀၀) ကျပ်ပေးရသည်ဟု ရွှေဝါဖူး ကားစပယ်ယာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပုဂ္ဂလိကမှ (express) ကားများနှင့် ခရီးသည်တင်ကားများကို တစ်စီးလျှင် လမ်းခွန် (၂၀၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံနေကြောင်း သိရသည်။
ထိုအကောက်အခွန်များကို မော်လမြိုင်မြို့အဝင် ရိုးဂိုးဂိတ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့အဝင် ဖောင်စိန်ဂိတ်၊ မော့ကနင်ဂိတ်နှင့် ရေးမြို့အဝင်သချိုင်းကုန်းနားဂိတ် စုစုပေါင်းဂိတ် ၄ ဂိတ်ရှိသည်။
မော်လမြိုင်မှ ရေးသို့ ကားခနှုန်းမှာ တစ်ဦးလျှင် (၂၅၀၀) ကျပ်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုလို အကောက်ခွန် ပိုမိုများလာခြင်းကြောင့် ကားခဈေးနှုန်းလည်း တက်လာမည်ကို ခရီးသည်များ စိုးရိမ်နေကြသည်။
“ဒီလိုမျိုး အကောက်ခွန်တွေများလာတယ်ဆိုတော့ ကားခတွေလည်းဈေးတက်မှာ သေချာတယ်” ဟု ၄င်း ခရီးသည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:38 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:37 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 2:45 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:15 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:45 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:58 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 8:10 PM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 8:09 PM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 8:08 PM0comments
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားသည့် ကျောင်းသူ/သားများ ကျပ်ငွေတစ်သိန်းပေးခြင်းဖြင့် အောင်၊ ရှုံး သိနိုင်
Thu 01 Apr 2010, ဂျူရီချိုင်း
၂၀၀၉-၂၀၁၀ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုထားသည့် ကျောင်းသူ/သားများ အောင်စာရင်းမထွက်ခင် အောင်၊ ရှုံး သိလိုပါက ကျပ်ငွေတစ်သိန်းပေးခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။
“အခုကျောင်းသားတွေ ဖြေဆိုထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစားမေးပွဲကို အောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဆရာမကို တစ်သိန်းပေးပြီးတော့ ဆရာမမှာ အဆက်အသွယ်ရှိတယ် အောင်ဖို့လုပ်ပေးမယ်” ဟု အထက်တန်းပြဆရာမတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး မုဒုံမြို့ခံ ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးက ပြောသည်။
မုဒုံမြို့ပေါ်တွင် ကျောင်းသူ/သားများ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးချိန်တွင် အောင်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် ကျောင်းသူ/သားများမှလွဲပြီး၊ မအောင်နိုင်ဘူး၊ အရည်အချင်းညံ့သည့် ကျောင်းသူ/သားများကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး၊ ဆရာ/ဆရာမကိုယ်တိုင် အိမ်တိုင်ရာရောက် စာမေးပွဲအောင်လိုပါက တစ်ယောက် တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ၄င်းတို့အား ပေးနိုင်လျှင် စာမေးပွဲအောင်ရန် လုပ်ပေးမည်ဟု မုဒုံမြို့ပေါ်ရှိ ကျောင်းသူ မိဘတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ငွေတစ်သိန်းအကုန်ကျခံပြီး၊ အောင်စာရင်းမထွက်ခင် အောင်၊ ရှုံး သိနိုင်သည်ဆိုတာကို အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်တယ်၊ မယုံမရှိနဲ့ဆိုပြီး၊ ၎င်းအထက်တန်းပြ ဆရာမက ပြောသည်။
ယမန်နှစ်က အဆောင်နေကျောင်းသူတစ်ဦးကလည်း ၎င်း၏ မိဘထံသို့ ဆရာမကိုယ်တိုင်လာပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စေလိုပါက ငွေပေးနိုင်လျှင် အောင်ပေးလို့ရသည်ဟု ဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။ ထိုကျောင်းသား၏ မိဘကလည်း ငွေပေးပြီးမှအောင်ရတာကို မလိုလားသဖြင့် ထိုဆရာမတောင်းသည့်ငွေကို မပေးလိုက်ရသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“ဆရာမက ကျနော့်ကိုပြောတာ ငွေသုံးသိန်းအကုန်ခံနိုင်ရင် စားမေးပွဲအောင်ဖို့ လုပ်ပေးမယ်တဲ့၊ ကျနော်လည်း ယုံပြီးပေးလိုက်တာပေါ့၊ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာ အောင်စာရင်းသွားကြည့်တာ ကျနော့်နာမည်မပါခဲ့ဘူး၊ ရှုံးတာပဲ ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံလည်းပြန်မရဘူး၊ အလိမ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ရတာပေါ့” ဟု မုဒုံမြို့မှ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆရာ/ဆရာမတို့မှ ငွေကြေးပေးနိုင်လျှင် စာမေးပွဲအောင်နိုင်သည်ဟု ကျောင်းသားမိဘများထံ ငွေကြေး သိန်းချီတောင်းခံထားပြီး၊ အောင်စာရင်းထွက်လာမှ ရှုံးသည်ဆိုသည့် ကျောင်းသူ/သား အများအပြားရှိကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခုနောက်ပိုင်း ကျောင်းသားမိဘများက ထိုကဲ့သို့ အလိမ်ခံမျိုး မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏ သားသမီးများအတွက် ငွေကြေအကုန်ကျမခံတော့ပဲ တကယ့်အရည်အချင်းစစ်နှင့်သာ ဖြေဆိုအောင်နိုင်သည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု လက်ခံလာကြကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 11:49 PM0comments